?Waxaan rabnaa in aan ka dhigno Gaalkacyo mid la mid ah Puntland inteeda kale, mana loo dulqaadanayo budhcad badeed siday doonto u dhex marto magaalada” Xeer ilaaliye. – Radio Daljir
Garowe, May 23 – Dambiyada la xidhiidha faldambiyeedyada iyo daroogada ayaa hoos uga dhacay gobolka Bari 85% sida uu Daljir u sheegey xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda dambiyada culus ee Puntland Bashiir Cabdi Garas.
Yaraanta dambiyada la xidhiidha budhcad badeednimada, daroogada, iyo dambiyada kale ayaa uu ku sheegey xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda dambiyada culus ee Puntland in ay ka dambaysay markii maxkmaddu ay dambiileyaal falalkaas ku kacay ay tallaabo sharci ah ka qaadday, gaar ahaanna kuwa magaalada Boosaaso.
Boqollaal budhcad badeed ah oo hore loo maxkamadeeyey, isla markaana imika ku xidhan xabsiga Boosaaso oo ciqaabtaas ku mutaystay markii ay maxkmadda dambiyada culus xukuntay, ayaa uu xeer ilaaliyaha maxkamaddani ku sheegey in ay qayb ka tahay sababaha hoos u dhaca dambiyada, sidoo kale Garowe ayaa uu sheegey in budhcad badeed badan lagu qabtay oo lagu xukumay. Shaqsiyaad lala xidhiidhiyo Al-Shabaab ayaa uu ku sheegey in iyagana ay maxkaddu xukuntay oo ay imika xabsiyo ku kala yaalla magalooyinka Puntland ku jiraan.
Gaalkacyo ayaa uu Md Garas ku sheegey in ay imika hoy u tahay budhcad badeedka, kuwaas oo uu sheegey in ay qaab dhuumaalaysi ah magaalada ku soo galaan, kagana baxaan marka ay ciidamada ammaanku magaaladaas gaadhaan.
Xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda Dambiyada culus ee Puntland waxa uu sheegey in maxkamaddiisa laga furayo galalka budhcad badeedka Gaalkacyo, dhawaanna ay ku soo wajahanyihiin, taasoo uu sheegey in ay ka damacsanyihiin in ay noqoto magaalo ka xorowda budhcad badeedda ?waxaan rabnaa in aan ka dhigno Gaalkacyo mid la mid ah Puntland inteeda kale, mana loo dulqaadanayo, mana lagu fiirsanayo budhcad badeed in ay siday doonto u dhex marto magaalada iyagoo nabad ku haysta?.